आईफोन समाचार टीम तपाईलाई क्रिष्टमसको शुभकामना दिन्छ आईफोन समाचार
Actualidad आईफोन टीम तपाईलाई क्रिष्टमसको शुभकामना दिन्छ
तपाइँ सबैलाई थाहा छ, आज डिसेम्बर २th छ। यद्यपि यो दिनको लागि संसार भर मा मनाइएको छ, यो भन्न सकिन्छ कि हिजो क्रिसमस को पूर्व देखि, हामी आधिकारिक रूपमा क्रिसमस को दिन मा छन्, केहि निश्चित तिथिहरु परिवार र हाम्रा प्रियजनहरु संग बिताउन को लागी। Actualidad आईफोनको सम्पूर्ण टीम, जसमा म सम्बन्धित भएको खुशी छु, इच्छा गर्ने अवसर गुमाउन चाहेनन् फेलिज नवीदाद हाम्रा सबै पाठकहरूलाई र पक्कै पनि, यो पोष्ट पढ्ने जो कोहीलाई।
स्पेनमा धेरै समय नबिताएसम्म हामीले जनवरी on मा थ्री किंग्सको पूर्वसूचना मात्र पाएका थियौं, तर अहिले सान्टा क्लाउज (केही देशहरूमा सान्ता क्लाउज), जसले २ gifts तारिख बिहान आफ्नो उपहारहरू छोड्छ। के त्यहाँ त्यस्तो कोही छ जो आईफोन छोडेको छ? भाग्यमानी! यस वर्ष म एक आईप्याड प्रो चाहान्छु, तर मलाई लाग्छ कि पछिल्लो बाह्र महिनामा मैले ज्यादै राम्रो व्यवहार गरेको छैन। अर्को वर्ष, निश्चित रूपमा
तपाईंहरू मध्ये जो म जस्तो, राम्रो व्यवहार गरेन र आफ्नै उपहार किन्न चाहानुहुन्छ (वा अन्य शरारतीलाई दिनुहोस्), आईफोन समाचार टीमले यसका साथ धेरै लेख लेख्यो सबै भन्दा राम्रो उपहार यस क्रिसमसको लागि, केहि लेखहरू जुन तपाईं हाम्रोमा उपलब्ध हुनुहुन्छ यस क्रिसमसको लागि आईफोनका लागि सबै भन्दा राम्रो उपहारहरूको संकलन (र केही अन्य)। दोस्रो सोचाइमा, हाम्रो सिफारिशहरू उपहार हराइरहेको थियो: कोइला। यो राम्रो छ, जे होस् तपाईंले दाँतको साथ सावधान हुनुपर्दछ।
म बिदा भन्छु फेरि एकपटक फेरि तपाईलाई खुशीयाली छुट्टिहरू दिन चाहन्छौं, यद्यपि मलाई खास पार्टीहरूमा मात्रै रहन मनपर्दैन। म तिमीलाई चाहन्छन् प्राथमिकता तपाईंको जीवनको सबै दिनको लागि खुशी ????
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » Actualidad आईफोन टीम तपाईलाई क्रिष्टमसको शुभकामना दिन्छ
धेरै धेरै धन्यवाद !!!! र उरुग्वे बाट म यी छुट्टीहरु र नयाँ वर्ष मा सफलता को लागी मेरो शुभकामना पठाउँछु!
आईओएस sale मा बिक्रीको लागि सबै सफारी ट्याबहरू कसरी बन्द गर्ने